के तपाइलाइ अचानक यस्ताे भयाे ? कोरोना चेक गराउनुस ! – Sudarshan Khabar
के तपाइलाइ अचानक यस्ताे भयाे ? कोरोना चेक गराउनुस !
नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका सबैमा ज्वरो, खोकी वा स्वासप्रस्वास जस्ता लक्षणहरू देखिएको छैन।
अहिले पनि थोरै व्यक्तिमा मात्र यी लक्षणहरू देखा परेका छन्।
तर यस्ता लक्षणविहीन संक्रमितहरूले कोरोनाको संक्रमण भने सार्न सक्छन्। कतिपयमा भने गन्ध वा स्वाद थाहा नपाउने समस्या पनि देखिनसक्छ। यद्यपी यस्ता लक्षणले शारीरिक पीडा नहुने हुँदा धेरैलाई याद हुँदैन।
स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रश्न गर्दा मात्र संक्रमितहरूले आफूलाई गन्ध वा स्वाद क्षमतामा ह्रास आएको महशुस गरेको बताउने गरेका छन्। नेपालमा यसबारे खासै चासो, जानकारी वा अध्ययन्/अनुसन्धान गरेको पाइएको छैन।
कोरोना संक्रमित सबैमा ज्वरो नहुन पनि सक्छ। नेपालमा अधिकांशमा संक्रमितमा ज्वरो देखिने गरेको पनि छैन। तर ज्वरो नदेखिदा पनि कोरोना संक्रमित हुँदा गन्ध वा स्वाद अथवा दुवै थाहा पाउने क्षमता गुमाउने गरेको उदाहरणहरू छन्।
अझ गन्ध वा स्वादमा देखिने ह्रास कोरोनाको मुख्य लक्षणहरू देखिनु पूर्वको संकेत रहेको भनिएको छ।
अमेरिकाको प्रतिष्ठित ‘मायो क्लिनिक’ स्वास्थ्य केन्द्रले लगभग ८० हजारको हाराहारीमा गरिएको एक अनुसन्धानमा पिसिआर परीक्षणमा पोजिटिभ देखिनु एक हप्ता अगाडि कोरोना संक्रमितमा गन्ध वा सुँघ्ने शक्तिमा झन्डै २७ गुणा बढीले ह्रास देखिने गरेको नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो। तर ज्वरो र खोकी भने कोरोना संक्रमितमा ४.२ गुणा बढी मात्र हुने गरेको देखाएको थियो।
एक अर्को अनुसन्धानले ४७ वटा अनुसन्धानको विश्लेषण गर्दा झन्डै ८० प्रतिशत संक्रमितमा गन्ध वा सुँघ्ने क्षमता क्षीण भएको पाइएको थियो। जर्मनीमा गरेको अनुसन्धानमा तीन कन्फर्म कोभिड-१९ मध्ये दुई जनामा सुँघ्ने क्षमता गुमाएको उल्लेख छ। तर यस्तो समस्या थोरैले मात्र स्वास्थकर्मीलाई जानकारी गराउने गरेका थिए।
यस्तै प्रकृतिको विभिन्न अनुसन्धानहरूले पनि यो नतिजालाई समर्थन गरेको देखिन्छ। तसर्थ अनुसन्धानहरूको नतिजाले ज्वरो नभए पनि यदी गन्ध वा सुँघ्ने क्षमता कमजोर/पूर्ण रोकिएमा कोरोनाको सम्भावना हुनसक्ने भनेर बुझ्न सकिन्छ।
ज्वरो तथा खोकी देखिनु पूर्व संक्रमितले धेरैलाई सार्न सक्ने भएकोले गन्ध वा सुँघ्ने शक्तिमा अचानक समस्या देखिए आफु अलग्गै बसेर तुरुन्त स्वास्थ परामर्श लिन सकिन्छ। यसले आफ्नो परिवार तथा आफ्ना आफन्त सचेत गराउन सकिन्छ।
पछिल्लो समयमा अमेरिकाको सेन्टरस फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सन (सिडीसी), बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिस (एन यच एस) र त्यस्तै नेपालको स्वास्थ्य निर्देशिकामा पनि कोरोना भाइरसको लक्षणहरूको पृष्ठमा गन्ध वा स्वादको क्षमता क्षीण हुने भन्ने प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।
अनुसन्धानहरूले यी लक्षणहरु कडा कोभिड-१९ मा भन्दा पनि सामान्य कोभिड-१९ हुँदा बढी हुने देखाएका छन्।
अर्थात् यस्ता लक्षणहरू देखिए कोभिड-१९ कडा (अस्पताल भर्ना हुने) हुने सम्भावना कम हुने भन्ने हो। गन्ध वा सुँघ्ने शक्तिमा आहेको ह्रास ९० प्रतिशतमा चार हप्ता भित्र सामान्य अवस्थामा फर्कने गर्दछ।
सीमा नाकामा वा प्रवेश विन्दुमा वा सपिङ मल, कार्यालय, सबैमा शरीरको तापक्रम जाँच गरिन्छ।
तर लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितको शरीरमा तापक्रम बढेको नहुन पनि सक्छ। नेपालमा अत्यधिक मात्रामा लक्षणविहिन कोरोना संक्रमित देखिँदै आइरहेको पनि छ।
त्यसैले नेपालको लागि कोरोना पत्ता लगाउने उदेश्यमा ठूलो चुनौती खडा भएको छ।
एकएक गरी सबैलाई पिसिआर गर्न महँगो र व्यवहारिक पनि हुँदैन।
तसर्थ गन्ध वा स्वादको क्षमता मापन गर्ने विधि प्रयोग गर्न सकिए सम्भावित कोरोना संक्रमित छुट्याउन सकिने छ र पिसीआर परिक्षणको लागि छनोट गर्न सहज हुनेछ।
गन्ध वा सुँघ्ने क्षमता आंशिक वा पूर्ण रुपमा गुमाउँदैमा अनिवार्य कोरोना संक्रमण हुन्छ भन्ने होइन। तर अनुसन्धानहरूले अचानक गन्ध वा स्वाद हराएमा त्यो कोरोना भाइरस संक्रमणको बलियो आधार हुनसक्ने जनाएको छ।
अहिलेको परिस्थितिमा यी लक्षणको आधारमा कोरोनाको सम्भावना आँकलन गर्न सकिन्छ र यस्तो अवस्था देखिएमा कम्तिमा पनि समयमा नै स्वस्थाकर्मीसँग परामर्श लिन सकिन्छ।
र यस्ता लक्षण खोट्याउन सजिलो उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। जस्तै बिहान चिया वा कफीको स्वाद ख्याल गर्न सकिन्छ।
मुख धुँदा साबुनको वास्ना आए/नआएको ख्याल गर्न सकिन्छ। साथै खाना खाँदा स्वाद विचार गर्न सकिन्छ।
यदि स्वाद र वास्ना थाहा नपाएमा कतै कोरोना संक्रमण त भएन भनेर एकपटक स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिनुपर्छ।
प्रकाशित भएको : August 18th, 2020
काेराेना अपडेट, समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली